We Have Gone Back To The Smith Regime - War Vets
Charntel 6 months ago
ma1 aka tokubatsirai sei macomrades makubvuma here kuti ngaapinde hake mkomana
Vana vema political elites aya vakabarwa in the 90s and ama2000s are richer and vanosplitter dollar huyanga yet people who suffered during the war(varwi, vasungwa, vaibikira nevaitumwa) vari kunhonga zvibaba zvemajuru nemiromo.
Kutotambudzika kuita even service the infrastructure yakasiiwa naSmith yacho.
It's very unfair. Unodemba kuti dai ndakaziva ndisina kuendako kuhondo kwacho. Imwe level yegreediness yacho yakaoma.
Inga maitidzidzisa wani kuti Comrade MaoZeDong said kana bhinzi ikadonhera pasi nhongai mudimburirane mese mukwane. Manje poto yese yebhinzi nhasi makuda kudya mega! Dzichakuzvimbirai soon.
Makuzvionaka- mavhurika makura
Ndiro team raita kungati Zanu ndi Mwari manje ngavachifeele kuvawo an ordinary person# Ngaapinde Hake Mukomana 🖐️